Yintoni isifo seParkinson (PD)?
I-PD sisifo sokuhamba ixesha elide. Iiseli zobuchopho ezilawula intshukumo ziqala ukufa kwaye zibangele utshintsho kwindlela ohamba ngayo, oziva ngayo, kunye nokwenza. Nangona iPD ingaqhubela phambili kwaye ibe nefuthe elibi kubomi bakho bemihla ngemihla, ayisosifo esisongela ubomi.
Yintoni ebangela iPD?
Isizathu ngqo sePD asaziwa. Isenokubangelwa yingxaki ngendlela esebenza ngayo ingqondo yakho. Imichiza ebizwa ngokuba yidopamine inceda ingqondo yakho ilawule ukuhamba, iingcinga kunye neemvakalelo. I-PD ibangela iiseli zobuchopho ezenza ukuba i-dopamine ife, ngenxa yoko ayinakho ukwenza ngokwaneleyo i-dopamine.
Yintoni eyonyusa umngcipheko kum PD?
Uneminyaka engama-60 okanye ngaphezulu
Imbali yosapho yePD
Ukubonakaliswa kwimichiza, njengemichiza yokubulala izitshabalalisi okanye i-herbicides
Zithini iimpawu kunye neempawu zePD?
Iimpawu zihlala zisiba mandundu ngokuhamba kwexesha. Unako ukufumana oku kulandelayo:
Ukungcangcazela (ukushukuma) okuhamba xa ushukuma okanye ulele
Ingxaki yokuhamba okanye yokuvuka kwindawo ohleli kuyo
Ingxaki yokuhamba okuncinci, njengokufaka amaqhosha kwimpahla okanye ukutya
Ukucwayiza okuncinci kunye neemvakalelo zobuso
Ukuqina ngokudibeneyo kunye nentshukumo yejerky
Ingxaki yokugcina ibhalansi yakho xa umile okanye utshintsha indawo
Ukurhuqa okanye ukuma kwindawo ohamba kuyo
Ingxaki yokuthetha nokubhala
Ichongwa njani iPD?
Umboneleli wakho wezempilo uya kubuza malunga neempawu kunye neempawu zakho. Uya kubuza malunga nembali yakho yezonyango kwaye ukuba unamalungu osapho anePD. Uya kukuvavanya kwaye angashukumisa iingalo zakho okanye imilenze ukuvavanya izihlunu zakho. Unokujonga ibhalansi yakho kunye nendlela ohamba ngayo.
Iphathwa njani iPD?
I-PD ayinakunyangeka. Injongo yonyango kukunceda ukulawula iimpawu zakho. Unokufuna oku kulandelayo:
Amayeza inokusetyenziselwa ukuphucula iingxaki zokuhamba, ezinje ngokuqina kwemisipha, ukujija kunye nokungazinzi. Umboneleli wakho wezempilo unokusebenzisa iintlobo ezininzi zamayeza ukunceda ukulawula iimpawu zakho.
Ityhefu yeBotulinum inceda ukulawula iingxaki ezinjengokungcangcazela, ingxaki yesinyi okanye yamathumbu, ingxaki yokuginya kunye nokuhlahlela amathe.
Ugqirha inokusetyenziselwa ukubeka isixhobo sombane ngaphakathi kwengqondo yakho ngexesha lotyando olubizwa ngokuba kukuvuseleleka kwengqondo okunzulu. Ukuvuselelwa kwengqondo okunzulu kunokunceda ukunciphisa iimpawu, ezinjengokungcangcazela kunye nokuqina. Xa isixhobo sikwingqondo yakho, unokucima okanye ucime isixhobo nanini na ufuna.
Ndingayilawula njani iPD?
Musa ukutya ukutya okuneeprotein okanye zobisi oluninzi. Zinokubangela iingxaki ngendlela amanye amayeza akho asebenza ngayo. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba zingakanani iiproteyini kunye nobisi ezikhuselekileyo zokutya. Usenokukuxelela ukuba utye ukutya okunefayibha eninzi ukuze kube lula ukuba nokuhamba kwamathumbu. Imizekelo kukutya okuziinkozo, iimbotyi, imifuno, kunye nezonka ezigcwele iinkozo. Buza ukuba ufuna ukuba kwisidlo esikhethekileyo.
Musa ukuqhuba Ngaphandle kokuba umboneleli wakho wezempilo athi kulungile.
Zilolonge ngokomyalelo. Ingcali yonyango ikufundisa imithambo yokunceda ukunyakaza kunye namandla, kunye nokunciphisa iintlungu. Oku kunokukunceda ukulawula ukunyakaza komzimba wakho, kwaye ugcine ibhalansi yakho.
Thetha nomboneleli wakho wezempilo malunga nonyango. Unokucebisa nayiphi na kwezi zinto zilandelayo:
Unyango emsebenzini isetyenziselwa ukufundisa izakhono ezinceda kwimisebenzi yemihla ngemihla. Ingcali yezomsebenzi inokukunceda ukhethe izixhobo zokukunceda ekhaya nasemsebenzini. Unokucebisa nangeendlela zokugcina ikhaya lakho nendawo yokusebenzela ikhuselekile.
Unyango lwentetho inokusetyenziselwa ukunceda ukuphucula amandla akho okuthetha okanye ukuginya.
Unyango olusempilweni lwengqondo Ingasetyenziselwa ukukunceda uthethe malunga nokuziva kwakho malunga nePD. Amalungu osapho lwakho anokuzimasa iintlanganiso ukuze afunde iindlela ezintsha zokukhathalela wena kunye nabo.
Umbutho weZifo zaseMelika eParkinson
135 IParkinson Ave.
Isiqithi saseStaten, NY 10305
Ifowuni: 1- 718 - 981-8001
Idilesi yewebhu: http://www.apdaparkinson.org
Isiseko seSizwe seParkinson
Ngo-1501 NW I-9th Avenue / iBob Hope Road
Miami, eFlorida, 33136-1494
Ifowuni: 1- 305 - 243-6666
Ifowuni: 1- 800 - 327-4545
Idilesi yewebhu: http://www.parkinson.org
Fowunela inombolo yongxamiseko yendawo yakho (911 eMelika) okanye ufowunelwe mntu ukuba:
Uziva uzenzakalisa okanye wenzakalise abanye.
Unentlungu esifubeni okanye uphefumla kancinci.
Uyabhideka, okanye unengxaki yokuthetha.
Uziva unentloko, udizizi, okanye utyhafile.
Unobuthathaka engalweni okanye emlenzeni.
Unesiyezi, intloko ebuhlungu, okanye utshintsho lombono.
Awulali kakuhle okanye ulele ngaphezu kwesiqhelo.
Awungekhe utye okanye utye ngaphezu kwesiqhelo.
Uziva ngathi imeko yakho iya isiba mandundu.
Uneempawu ezintsha okoko utyunjiwe okokugqibela.
Iimvakalelo zakho ezibuhlungu okanye iingcinga ziguqula indlela osebenza ngayo emini.
indlela yokongeza iibhokisi kwilizwi
Ndingayithatha i-aspirin nge-acetaminophen
yeyiphi le pilisi
Iipilisi ze-loratadine 10 mg
iziyobisi kunxibelelwano lweziyobisi